Ukususela kumaxesha amandulo, amayeza emvelo, iintlobo ezahlukeneyo ezivela kwizityalo okanye amayeza ayenziwe ngamacandelo ezendalo asetyenziswe ukuphatha abantu. Ngoko ke, ngeli xesha lethu, ummi oqhelekileyo wehlabathi uthembela amayeza aveliswe ngokusekelwe kwiprotoextracts, kunokuba izinto ezivela kwimveliso. Ngokuqhelekileyo, iimveliso zendalo ziyasebenza njengoko ziveliswa ngamakhemikhali, kwaye ubungqina yimiphumo yezifundo ezininzi zeziko lophando. Ngoko ke, kunokubizwa ngokuba yindalo yemvelo kwii-pharmacy zonyuka inani lamachiza. Enye yezilungiselelo siza kuqwalasela namhlanje kwinqaku lethu, elibizwa ngokuthi "iiphilisi ze-Kanefron - ukusetyenziswa kunye nokuphikisana."
I-Kanefron isichengululo esisebenzayo sokunyanga nokunciphisa iimpawu zezifo ezahlukileyo ze-urinary system. Iveliswa yinkampani yaseJamani i-Bionorica AG. Ifilosofi yale nkampani isekelwe kwingcamango ye "fitoring", oku kuthetha ukuba ubugcisa bezobugcisa zamuva kunye nezithethe zamandulo ze-phytotherapy zisetyenziselwa ukufumana amayeza asebenzayo. Ngoko ke, iipilisi nganye zeliphi na iziyobisi eziveliswe yinkampani liqukethe inani elilinganayo lezinto ezisebenzayo, ngelixa umngcipheko weempendulo ezingalunganga ziphantse.
I-Kanefron, ngaphezu kweetratifti okanye i-dragees, iyafumaneka nakwehla. Ukubonakala kwayo kwintengiso kwakubizwa ngokuba yizona ziganeko eziphambili kwihlabathi le-pharmacology, kuba ngaphambi kokuba kukho ubunzima abathile kunyango lwe-urinary. Ngaphambili, izigulane ezinezifo ezithathelwanayo zale nkqubo ziye zamiselwa izidakamizwa ze-antimicrobial. Ngexesha elifanayo, ezo ziyobisi ekuqaleni zachaphazela kakhulu umzimba, zaza zabangela ukuba zihlale zihlala, ngenxa yoko kubakho ukutshintsha ngokukhawuleza izityalo ezincinci, kwaye isifo sahlengahlengiswa kwisilwanyana, ukuphumelela ekugqibeleni kwehla.
Enye yeenzuzo eziphambili zeiphilisi ze-Kanefron yindlela yokusebenzisa kwabo bobabini njengonyango oluphambili kunye nesongezo esisebenzayo, esivumela ukwandisa umphumo wonyango olusisiseko sokukhusela.
Izinto eziphambili zeso sityalo ziyiqabunga leRomary, ingcambu yelovage kunye nengca yegolide-eyiwaka. Ngokudibeneyo, ezi zinto zineempembelelo eziphambili zokuphulukisa kwi-urinary system. Ndiyabulela kumafutha abalulekileyo e-rosemary ne-lovage, ukunikezelwa kwegazi ye-renal epithelium kuphuculwe. Ama-Phthalide, afumaneka kumthandi, unempembelelo ye-antispasmodic ephucula ukuphuma komchamo, kwaye intlungu iyancipha. I-rosemary yaziwa nangokuzikhusela kwayo. Kwi-lovage eyinkimbinkimbi, i-rosemary kunye negolide-intliziyo kunceda ukulungelelanisa i-acidity yomchamo, ngoko, ukukhusela ukubunjwa kwamatye eentso, i-Kanefron ingasetyenziselwa iinjongo zokukhusela.
Uphando lwezonyango lubonise ukuba uKanefron unokubekezela kakuhle, inokusetyenziswa kwimeko apho ukusetyenziswa kwezidakamizwa ezininzi kungathandeki, umzekelo, kwi-lactation nokukhulelwa, kunye nakumntwana.
Ngezifo ezifana ne-cystitis, i-pyelonephritis, izifo ezithathelwanayo kunye nezifo ezithintekayo ezintsheni, ezinsukwini zokuqala kukho ukuphuculwa kwintlalo yezigulane. Kunconywa ukusebenzisa le mveliso ukukhusela ukubonakala kwamatye kwizintso, kunye nasemva kwemisebenzi.
Oogqirha bancome ukuthabatha iKanefron kuqala njengonyango, kwaye udibanise umphumo. Ngaloo ndlela, le nkunkuma ingasetyenziselwa ixesha elide, nangona kunjalo le migaqo iyimntu ngamnye. Ukuba kukho isidingo sokuthatha iziyobisi ngabantwana, kunye nokukhulelwa kunye nokuncelisa, kuyimfuneko ukunxibelelana nodokotela kwaye uqaphele ngokucacileyo imiyalelo yonyango.
Ukungqinelana nokusetyenziswa kwekamphorhor:
- utywala (ngenxa yeziyobisi ngendlela yamaconsi);
- Abantwana abangaphantsi kweminyaka engama-6 (ngenxa yeziyobisi ngendlela ye-dragee);
- Hypersensitivity kwezinye iinqununu zeziyobisi.
Inkqubo yokuqhawula ukukhulelwa komfazi
Ngesihlandlo sokuqala e-US, isizukulwana esitsha samamawele sazalwa, sakhulelwa ngokufanelekileyo
Izinkukhu zeenkukhu kwi-grill
I-Recipe yetshokoledi ngepereyi
Indlela yezinto eziphilayo zokulwa namaqhinga
Indlela yomntu ngamnye kumntwana osenkulanga